Ampidino Live for Speed: S2 0.6E ho an'ny Windows
Ampidino Live for Speed: S2
Sehatra: Windows Version: 0.6E Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (135.51 MB)
Ampidino Live for Speed: S2, Live for Speed ​​dia lalao simulation racing azo tanterahina izay azonao lalaovina aminny solo-sainao Windows operating system. Live for Speed ​​dia iray aminireo lalao malaza indrindra izay tokony tianny mpilalao rehetra te handray anjara aminny fanahafana ny hazakazaka azo tanterahina. Raha te hankafy ity lalao ity ianao izay tsy misy fanampiana ho anny mpampiasa aminny lafiny rehetra, dia mamporisika anao izahay hampiasa ny familiana fa tsy ny fitendry.
Satria ny Live for Speed ​​dia fanahafana tena tsara ary tsy tianay ny hanimbanao azy aminny fitendry. Rehefa dinihina manokana fa hisorohana ny fihetsika tampoka aminny hazakazakao aminny Internet izany. Na dia afaka mifaninana irery na manohitra ny faharanitan-tsaina aminny lalao aza ianao dia hanomboka ny tena fahafinaretana rehefa maka ny toeranao aminny hazakazaka aminny mpilalao hafa sy ny mpanohitra anao aminny Internet ianao.Miaraka aminny Live for Speed, ny hazakazaka aminny olon-kafa dia tena mahafinaritra sy mahafinaritra, ary ahafahanao manaporofo ny tenanao aminny ligy hazakazaka aminny sokajy samihafa.
Ny maotera fizika tsara indrindra ilainao dia mahatsapa ny fientanam-po aminny fanahafana tena hazakazaka tena izy miandry anao ao aminny LFS. Fiara maro samihafa, lalana samihafa azonao hazakazaka, mpamily, akanjo ary maro hafa no nitranga taminity fanaingoana hazakazaka tena tsara ity. Ny iray aminireo faritra tsara indrindra aminny lalao dia ny tsy maintsy hametrahanao ny fotoana mety hitehirizana toy ny aminny hazakazaka tena izy.
Tsy maintsy mitsambikina ianao raha te hahazo lasantsy na hanova ny kodiaranao raha ilaina izany. Live for Speed ​​dia manana ny zavatra antenainao avy aminny tena fanahafana hazakazaka sy maro hafa.Satria ny lalao LFS (Fiainana ho anny hafainganam-pandeha) dia dikan-pitsapana, misy fiara 3 samihafa ary lalana iray ihany no azonao hazakazaka. Raha tianao ny lalao ary te hanohy hilalao dia mila mividy lakilenny lisansa ianao.
Live for Speed: S2 Specs
Haben'ny rakitra: 135.51 MB